Hormone Taranka, Borojestaroon duritaanka, Altrenogest Solution Oral - Hormone Labaad
Buugga la isku duro vitamin AD [Description] wax soo saarka Tani waa huruud ah dareere ah midab ama iftiin saliid cad. [Function iyo Isticmaalka] wax soo saarka waxa ku jira vitamin A iyo D. vitamin A ah u shaqayn karaa sida kordhiyaan koritaanka anima
daroogada Hormone. Alaabta Tani waxay kor u qaadi kartaa kalluunka hypophysis in ay sii daayaan GTH; kor loogu qaado follicle kalluunka dumar ah ay u qarsan estrogen oo kaa caawin doona dardar maturity follicle, ugxan samaynta iyo wax soo saarka ah ee la yirahdo gulkroppshormon; kicin wax soo saarka shahwada iyo maturity kalluun lab. Waa odinagogue in yar oo kalluun sare-ool ah, hubinta waxtarka wanaagsan gaar ahaan buuraleyda
Waxaanu higsanaynaa in aanu noqon shirkad keentay caalamiga ah in uu leeyahay tayada ugu fiican ee aannu duurka.
Waxaan ku eryan doonaa technology ugu horumarsan dunida iyo indheer-xirfadeed si ay u abuuraan tayada sareeya iyo adeeg fiican, sidoo kale helaan sumcad iyo saamiga aad suuqa la sumcadda wanaagsan iyo daacadnimada iyo sidoo kale tayada deggan.
Ka go'an in ay
Ningbo Second Hormone Factory waxaa la aasaasay by 1988. Waxaan la ka go'an in industry taranta xoolaha muddo 30 sannadood ah, oo aan lagu biiriyo wax cayriin, cilmi baarista iyo horumarinta, soo saaridda, baaritaanka, iibka, iyo taageero macaamiisha si wadajir ah u noqon ganacsi oo baaxad wayn leh. Shirkadda Our ayaa la siiyay sida "Zhejiang warshadaha High-casriga ah" oo Cixi Top 20 shirkadood "...
Nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah ama ballan